Andramo ny sambo masoandro mankany amin'ny masoandro ao amin'ilay hazakazaka Mahagaga ny masoandro | Androidsis
Alefaso fiarandalamby amin'ny herin'ny masoandro mankany amin'ny mpanjaka kintana amin'ny hazakazaka ny masoandro ny sambonao
Race the Sun dia lalao sambo manandevo sy manokana izay itondrantsika sambo ampiasain'ny herin'ny masoandro ary manome antsika traikefa mahafinaritra feno haingam-pandeha sy fotoana mahakivy.
Ny tena tianay indrindra dia ny fahatsapana faingana ny hafainganana izay vokariny amin'ny fotoana rehetra ary ny fomba tokony hitandremantsika tsara ny fanaraha-maso ny sambo mba hahafahantsika mahazo isa ary amin'izany dia hiditra amin'ireo sambo, fanatsarana ary maro hafa.
1 Hafainganana mirehitra amin'ny hazakazaka amin'ny masoandro
2 Fehezo ny sambonao ary manaova dingana haingana amin'ny Race the Sun
3 Miaraka amin'ny fahatsiarovana ilay Nintendo Starhio angano
Hafainganana mirehitra amin'ny hazakazaka amin'ny masoandro
Race the Sun dia lalao mitaky loharano avy amin'ny findainao, fa ho setrin'izany dia manome anao traikefa saika tsy manam-paharoa ianao mba hahafahanao mahatsapa ny hafainganan'ny findainao. Ny fahalalahana miaraka amin'ny habaka malalaka ary tsy misy fetra amin'ny horonana amin'ny sisiny, dia hampirisika antsika hahatsapa fa mifanatrika amin'ireo hazakazaka amin'ny sarimihetsika Star Wars ireo isika.
Ireo habaka ireo dia ho feno karazana singa rehetra izay mitovy amin'ny tranobe sy fotodrafitrasa ary hanome antsika ny fahatsapana ho eo anoloan'ny tanàna futuristic feno. Diniho ihany koa ny tavy izay hitondra antsika alohan'ireo fitsambikinana izay mamela antsika hahatratra faritra hafa.
Fanaraha-maso ny sambo mandeha amin'ny herin'ny masoandro Tsotra ihany izy io ary amin'ny tutorial kely dia hanana tetika vitsivitsy isika. Manana ny afovoany isika ny famindran-toerana miankavia na miankavanana, saingy fohy dia fohy foana, ary ireo lava raha efa tantintsika ny sisin'ny efijery.
Fehezo ny sambonao ary manaova dingana haingana amin'ny Race the Sun
Hazavao ary ny masoandro araka izany alohan'ny fanaraha-maso somary mivaingana ary hahafahantsika mivezivezy amin'ireo tranobe misy endrika geometrika ireo. Tsy maintsy hampiasa ny fanaraha-maso avy eo afovoan'ny efijery na ny sisiny isika mba handehanana haingana amin'ireo fanitarana izay hiteraka rehefa milalao isika.
Avy amin'ny magazay ananantsika fidirana amin'ny sambo maro kokoa sy ny «lalan» izay ny soritry ny loko avelantsika any aoriana. Andiana fanaingoana manokana izay mampitombo ny fiainana sy ny fotoana filalaovana ary manery antsika hiasa kely ny lalao mba hahazoantsika teboka bebe kokoa.
Miatrika lalao freemium isika, koa zatra io dokam-barotra io, na dia sarotra aza ny mampiasa azy raha tsy te hampiasa ireo herinaratra izay hanome antsika teboka betsaka indrindra. Mitranga izany amin'ny lalao freemium hafa ary marina fa eto isika dia saika manana adidy ara-moraly hamoaka dokambarotra, mahafantatra fa amin'ity fomba ity dia afaka manome valisoa ny mpamorona ity arcade mahery ity isika.
Miaraka amin'ny fahatsiarovana ilay Nintendo Starhio angano
Ireo izay nanananao tsara vintana ny manandrana Starhio amin'ny andronyAzo antoka fa hampatsiahy anao ireo lafiny geometrika rehetra amin'ny habaka sy tranobe novokarina io rehefa mizaha ireo ambaratonga samihafa. Ny sidin'ny sambontsika sy ny fahaizany mihodina haingana dia iray amin'ireo fahaiza-manao izay tsy maintsy fantarintsika ny fomba fikirakirantsika.
Lalao manintona tena manintona, fa tsara kokoa noho ny hafainganam-pandehany rehetra isika izay avy amin'ny efijery manome fahatsapana tsara ny lalao. ny tena fanandramana Nintendo Starhio Ary izany dia fahombiazana ho an'ity karazana lalao na simulator ity. Mazava ho azy, mandehana manomana finday tsara, satria mila loharanom-pahalalana vao afaka mihetsika; raha ny tena izy dia misy ny mpampiasa sasany izay mimenomenona ny zava-bitan'izy ireo avy any amin'ny tobiny, koa mitandrema.
Race the Sun dia lalao vaovao ho an'ny Android izay mahazo hevitra tsara ao amin'ny Google Play Store, na dia misy aza ireo mpampiasa hafa mitaraina amin'ny tsy fahombiazan'ny fampisehoana. Raha manana finday tsara ianao, dia aza ela ny fanendrena anao hizaha toetra ny hafainganam-pandeha avo lenta ateraky ny endrika geometrika marobe izay tsy maintsy hamiliantsika ny sambontsika mba tsy hianjera aminy. Lalao manokana tsy misy fisalasalana ary manome sosokevitra avy amin'ireto andalana ireto izahay raha toa ka mitranga amin'ny hafa izany. Mandao anao izahay miaraka amin'ny Adin'i Cosmic lehibe ary izay hamoronana ny sambonao manokana.
Hazavao ny masoandro
Ny fahatsapana faingana
Mamily amin'ny toerana malalaka
Elemental an'ny Elemental
Developer: ATSIMATRA TBG
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Alefaso fiarandalamby amin'ny herin'ny masoandro mankany amin'ny mpanjaka kintana amin'ny hazakazaka ny masoandro ny sambonao
Ny fandikana voalohany an'ny Sony Xperia 5 Plus dia aseho
Amazfit T-Rex, ity no famantaranandro Xiaomi vaovao misy fanoherana lehibe sy bateria tsy mety ritra